Iwu Nzuzo | Li Tim-Oi Foundation
Iwu nzuzo a na-emetụta gị, Onye ọrụ weebụsaịtị a yana Li Tim-Oi Foundation, onye nwe ya na onye na-eweta weebụsaịtị a. Li Tim-Oi Foundation na-eji ihe nzuzo gị akpọrọ ihe. Iwu nzuzo a metụtara ojiji nke data anyị niile anakọtara ma ọ bụ nke enyere gị n'aka nke iji Weebụsaịtị.
Biko gụzie iwu nzuzo a nke ọma.
1. N'ime iwu nzuzo a, eji nkọwa ndị a:
data kpokọtara ozi niile ị nyefere na Li Tim-Oi Foundation site na Weebụ. Nkọwa a gụnyere, ebe enwere ike, nkọwapụta enyere na Iwu Nchedo Data;
Cookies obere ederede ederede etinyebere na kọmputa gị site na Weebụsaịtị a mgbe ị gara ụfọdụ akụkụ nke weebụsaịtị na / ma ọ bụ mgbe ị na-eji ụfọdụ njirimara weebụsaịtị. E depụtara nkọwapụta kuki ndị saịtị a na-eji usoro a n'okpuru (Kuki);
Iwu Nchedo Data iwu ọ bụla metụtara na nhazi nke Data nkeonwe, gụnyere ma ejedebeghị na Ntuziaka 96/46 / EC (Ntuziaka Nchedo Data) ma ọ bụ GDPR, yana iwu obodo, usoro iwu na nke nso nso a, ruo ogologo oge GDPR dị dị irè na UK;
GDPR iwu nchekwa data izugbe (EU) 2016/679;
Li Tim-Oi Foundation, anyị ma ọ bụ anyị Li Tim-Oi Foundation nke Flint House, Selmeston, BN26 6UD;
Iwu kuki UK na EU Iwu nzuzo na Ntuchi Igwe na Eletrọnik (EC Direction) 2003 dika Iwu Nkwupụta na Nzuzo (Ntuchi) EC 2011 emeziri;
Onye ọrụ ma ọ bụ gị ndị ọzọ na-abanye na weebụsaịtị ma ọ bụghị (i) nke Li Tim-Oi Foundation na-arụ ọrụ ma na-eme ihe mgbe ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ (ii) na-arụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ ma ọ bụ na-enye ọrụ ndị Li Tim-Oi Foundation na ịbanye na Weebụsaịtị ahụ na ntinye aka na ụdị ọrụ a; na weebụsaịtị webụsaịtị ị na - eji ugbu a, ltof.org.uk, yana ngalaba ngalaba ọ bụla na saịtị a belụsọ na hapughi usoro ha na ọnọdụ ha.
2. N'ime iwu nzuzo a, belụsọ ihe gbara amaokwu a chọrọ nkọwa dị iche:
otu nwere otutu ihe na otutu; ntụaka maka nkebi ahịrịokwu, nkebi ahịrịokwu, usoro ihe omume ma ọ bụ itinye aka bụ n'okpuru nkebi, nkebi ahịrịokwu, usoro oge ma ọ bụ tinye nke iwu nzuzo a; ntụaka maka mmadụ gụnyere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ndị gọọmentị, ntụkwasị obi na mmekọrịta;
“Gụnyere” pụtara na ọ pụtara “gụnyere enweghị oke”;
banyere usoro iwu ọ bụla gụnyere ịgbanwe ma ọ bụ ndozigharị ọ bụla;
isi okwu na okpuru-ya abughi otu nke iwu nzuzo a.
Uzo nke iwu nzuzo a
3. Iwu nzuzo a na-emetụta naanị omume nke Li Tim-Oi Foundation na Ndị Ọrụ na-asọpụrụ weebụsaịtị a. Ọ gbataghị gaa na weebụsaịtị ọ bụla enwere ike ịnweta site na Weebụ a gụnyere, mana ọnweghị oke, njikọ ọ bụla anyị nwere ike ị nweta na weebụsaịtị mgbasa ozi mgbasa ozi.
4. Maka ebumnuche nke Iwu Nchedo Data metụtara, Ntọala Li Tim-Oi bụ "onye njikwa data". Nke a pụtara na ntọala Li Tim-Oi na-ekpebi ebumnuche maka ya, yana otu esi etinye data gị.
5. Anyị nwere ike ịnakọta data ndị a, nke gụnyere Data nkeonwe, n'aka gị:
aha; ụbọchị ọmụmụ; okike; ọrụ; ozi ịkpọtụrụ dịka adresị email na akara ekwentị; ozi igwe mmadu di ka akwukwo ozi, ihe ndi masiri gi; na nke ọ bụla, dị ka iwu nzuzo a si dị.
Otu anyị si anakọta data
6. Anyị na-anakọta data n'ụzọ ndị a: ọ bụ gị nyere gị data; na
anakọtara data na akpaghị aka.
Data nke enyere anyi n’aka anyi
7. Li Tim-Oi Foundation ga-anakọta data gị n'ọtụtụ ụzọ, dịka ọmụmaatụ: mgbe ị kpọtụrụ anyị site na Weebụsaịtị, site na ekwentị, posta, e-mail ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla; mgbe ị na-eji ọrụ anyị; na nke ọ bụla, dị ka iwu nzuzo a si dị.
Data anakọtara na akpaghị aka
8. Ruo n'ókè ị nwetara weebụsaịtị, anyị ga-anakọta Data gị na akpaghị aka, dịka ọmụmaatụ: anyị na-anakọta ụfọdụ ozi gbasara nleta gị na weebụsaịtị. Ozi a na - enyere anyị aka imeziwanye ọdịnaya weebụsaịtị na igodo ụzọ, yana gụnyere adreesị IP gị, ụbọchị, oge na ugboro ole ị ga - enweta weebụsaịtị yana otu ị si eji ma mekọrịta na ọdịnaya ya. anyị ga-anakọta data gị na akpaghị aka site na kuki, n'usoro na ntọala kuki na ihe nchọgharị gị. Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki, na otu anyị si eji ya na weebụsaịtị, lee ngalaba dị n'okpuru, isi “Kuki”.
Ojiji anyi nke Data
9. Enwere ike ịchọ data ma ọ bụ niile dị n'elu site n'oge ruo n'oge iji nye gị ọrụ na ahụmịhe kachasị mma mgbe ị na-eji weebụsaịtị anyị. Kpọmkwem, Anyị nwere ike iji data maka ihe ndị a: debe ndekọ ndekọ dị n'ime; na nke ọ bụla, dị na iwu nzuzo a.
10. Anyị nwere ike iji Data gị maka ebumnuche ndị dị n'elu ma ọ bụrụ na anyị chere na ọ dị mkpa ịme ya maka ọdịmma anyị ziri ezi. Ọ bụrụ na afọghị gị na nke a, ị nwere ikike ịjụ n'ọnọdụ ụfọdụ (lee ngalaba nke isiokwu ya bụ "Ikike gị" n'okpuru).
Onye anyị na-ekerịta data na
11. Anyị nwere ike ịkekọrịta data gị na ndị otu ndị a maka ebumnuche ndị a: ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ na / ma ọ bụ ndị ndụmọdụ ọkachamara - maka ebumnuche ntinye akwụkwọ; na nke ọ bụla, dị na iwu nzuzo a.
Ichekwa data echekwa
12. Anyị ga-eji usoro ọrụ aka na nhazi iji chekwaa data gị, dịka ọmụmaatụ: nnweta na akaụntụ gị na-ejikwa paswọọdụ na aha njirimara nke gị na iche. anyị na-echekwa data gị na sava echekwara.
13. Nka na ụzụ na nhazi gunyere ihe iji merie nsogbu data echere. Ọ bụrụ n ’ị na-enyo ihe ọ bụla ma ọ bụ mfu ma ọ bụ ohere na-enweghị ikike na data gị, biko mee ka anyị mata ozugbo site na ịkpọtụrụ anyị site na adreesị ozi ịntanetị a: info@ltof.org.uk.
14. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi zuru ezu na Nweta Nchekwa Ntanetị banyere otu esi echebe ozi gị na kọmputa gị na ngwaọrụ gị megide aghụghọ, ohi njirimara, nje na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ n'ịntanetị, biko gaa na www.getsafeonline.org. Nweta Nchekwa ntanetị na-akwado site n'aka gọọmentị HM na azụmaahịa ndị na-eduga.
15. belụsọ ma ọ bụrụ na iwu choro ma ọ bụ kwe ka iwu kwadoro, anyị ga-ejide Data gị naanị
Na sistemu anyị maka oge dị mkpa iji mezuo ebumnuche ndị akọwapụtara na iwu nzuzo a ma ọ bụ ruo mgbe ị rịọrọ ka ehichapụ data ahụ.
16. Ọ bụrụgodi na anyị wepụrụ data gị, ọ nwere ike ịnọsi ike na nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ nchekwa maka iwu, ụtụ ma ọ bụ usoro nchịkwa.
17. I nwere ikike ndị a n'ihe metụtara data gị:
Ikike ịnweta - ikike ịrịọ (i) akwụkwọ nke ozi anyị jidere gị n'oge ọ bụla, ma ọ bụ (ii) na anyị gbanwee, melite ma ọ bụ hichapụ ụdị ozi ahụ. Ọ bụrụ na anyị nye gị ohere ịnweta ozi anyị jidere gị, anyị agaghị ana gị ego maka nke a, belụsọ na arịrịọ gị “gosipụtara na ọ bụ enweghị isi ma ọ bụ karịa.” Ebe anyị nwere ikike ịme ya, anyị nwere ike jụ arịrịọ gị. Ọ bụrụ na anyị ajụ arịrịọ gị, anyị ga-agwa gị ihe kpatara ya.
Ikike imezi - ikike iji dozie data gị ma ọ bụrụ na ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke.
Ikike ihichapu - ikike ịrịọ ka anyị hichapụ ma ọ bụ wepu data gị na anyị
Ikike igbochi anyị iji Data gị - ikike iji “gbochie” anyị iji Data gị ma ọ bụ belata ụzọ anyị nwere ike iji ya.
Ikike iji nweta data - ikike ịrịọ ka anyị bugharịa, detuo ma ọ bụ bufee data gị.
Ikike ịjụ - ikike ịjụ iji ojiji nke data gị gụnyere ebe anyị jiri ya maka ọdịmma anyị ziri ezi.
18. Iji mee ajụjụ nyocha, gosipụta ikike gị niile edepụtara n'elu, ma ọ bụ wepu nkwenye gị na nhazi data gị (ebe nkwenye bụ usoro iwu anyị maka ịhazi data gị), biko kpọtụrụ anyị site na adreesị ozi-e a: info @ ltof.org.uk.
19. Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju etu etu ị si eme mkpesa gị na data gị ka anyị ji aka anyị, ị nwere ike ịtugharị mkpesa gị na ikike nchebe data dị mkpa. Maka UK, nke a bụ Office Commissioner of Information (ICO). Enwere ike ịchọta nkọwa kọntaktị ICO na weebụsaịtị ha na https://ico.org.uk/.
20. Ọ dị mkpa na Data anyị ji banyere gị ziri ezi ma dị ugbu a. Biko mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na data gị gbanwere n'oge anyị na-ejide ya.
Nyefee na mpụga mpaghara mpaghara European Economic Mpaghara
21. Enwere ike ịchekwa ma dozie data nke anyị nara n'aka gị ma bunye ya gaa na mba na-abụghị mpaghara mpaghara European Economic Area (EEA). Iji maa atụ, nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na sava anyị dị na obodo na-abụghị EEA ma ọ bụ na otu onye na-enye ọrụ nọ na mba na-abụghị EEA.
22. Anyị ga-ebugharị data na mpụga EEA ebe ọ nabatara na iwu nchebe data yana ụzọ isi nyefee na-enye nchebe zuru oke n'ihe metụtara data gị, dịka site na nkwekọrịta mbufe data, na-etinye usoro nkwekọrịta oge ugbu a na European nakweere. Kọmịshụa, ma ọ bụ site na ịbanye na EU-US Shield Shield Framework, na nzukọ na nnata nke data dabere na United States of America.
23. Iji hụ na Data gị nwetara ọkwa nchebe zuru oke, anyị etinyela ihe nchedo na usoro kwesịrị ekwesị n'etiti ndị ọzọ anyị na-ekerịta data gị. Nke a na - ebido na ndị otu ndị ọzọ na-ahụ maka data gị n'ụzọ kwekọrọ na Iwu Nchedo Data.
24. Weebụsaịtị a nwere ike, site n'oge ruo n'oge, na-enye njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị ike ịchịkwa weebụsaịtị ndị dị otú a ma anyị anaghị ahụ maka ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị a. Amụma nzuzo a anaghị eme ka ị jiri weebụsaịtị ndị dị otú ahụ. A gwara gị ka ị gụọ iwu nzuzo ma ọ bụ nkwupụta nke weebụsaịtị ndị ọzọ tupu iji ha.
Mgbanwe nke inwe azụmaahịa na njikwa
25. Li Li-Oi Foundation nwere ike, site n'oge ruo n'oge, mụbaa ma ọ bụ belata azụmahịa anyị na nke a nwere ike ịgụnye ire na / ma ọ bụ nnyefe nke njikwa niile ma ọ bụ akụkụ nke Li Tim-Oi Foundation. A ga-enyefe data nke ndị ọrụ nyere, ebe ọ bara uru maka akụkụ ọ bụla nke azụmahịa anyị, gbasaa ya na onye nwe ya ma ọ bụ ndị ọzọ na-achịkwa ikike, n'okpuru usoro iwu nzuzo a, ka a ga-ahapụ iji data ahụ. ebum n’uche weputara anyi ya na mbu.
26. Anyị nwekwara ike ikpughere onye zụrụ azụmaahịa nke azụmahịa ma ọ bụ akụkụ ya ọ bụla.
27. N'ihe atụ ndị a dị n’elu, anyị ga-eme ihe n’uche iji hụ na echedoro nzuzo gị.
28. Weebụsaịtị a nwere ike itinye ma banye na Kuki ụfọdụ na kọmputa gị. Li Tim-Oi Foundation na-eji kuki iji melite ahụmịhe nke iji Weebụsaịtị. Li Tim-Oi Foundation ahọrọla kuki ndị a nke ọma ma buru ụzọ iji hụ na echedoro ma na-akwanyere nzuzo gị oge niile.
29. Kuki niile eji saịtị a na-eji dị ka iwu UK kuki UK na EU dị ugbu a.
30. Tupu Ebe nrụọrụ Weebụ kuki na kọmputa gị, a ga-edobe gị n’ozi ozi na-arịọ nkwenye gị ịtọ kuki ndị ahụ. Site n’inye nkwenye gị n’itinye kuki, ị na-enyere Li Li-Oi Foundation aka ịnye gị ahụmịhe na ọrụ dị mma. May nwere ike, ma ịchọrọ, jụ ikwenye na kuki Cookies; agbanyeghị ụfọdụ atụmatụ nke weebụsaịtị ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ zuru oke ma ọ bụ dika achọrọ.
31. Weebụsaịtị a nwere ike itinye kuki ndị a:
Ndị a bụ kuki achọrọ maka ịrụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Ha gụnyere, dịka ọmụmaatụ, kuki na-enyere gị aka ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ echedoro.
Ha na-ahapụ anyị ka anyị mata ma gụọ ọnụọgụ ndị ọbịa na ịhụ etu ndị ọbịa si agagharị na weebụsaịtị anyị mgbe ha na-eji ya. Nke a na - enyere anyị aka imeziwanye ụzọ otu weebụsaịtị anyị si arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, site n'ịhụ na ndị ọrụ na - achọta ihe ha na - achọ.
32. can nwere ike ịchọta ndepụta nke kuki anyị na-eji na Oge Aku Ozo.
33. can nwere ike ịhọrọ iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ kuki na ihe nchọgharị intaneti gị. Site na ndabara, ọtụtụ ihe nchọgharị intaneti na-anabata kuki mana enwere ike ịgbanwe ya. Iji nwetakwuo nkọwa, biko gakwuru ndị enyemaka enyemaka na ihe nchọgharị intaneti gị.
34. can nwere ike họrọ ihichapụ kuki n'oge ọ bụla; agbanyeghị ị ga - atụfu ozi ọ bụla na - enyere gị aka ịnweta weebụsaịtị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma gụnyere, mana ọnweghị oke na nhazi ntọala.
35. A na-atụ aro ka ị gbaa mbọ hụ na ihe nchọgharị ịntanetị gị ka bụrụ nke dị ọhụrụ na ị gakwuru enyemaka na nduzi nke onye nrụpụta ihe nchọgharị intaneti gị ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na ịhazigharị ntọala nzuzo gị.
36. Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki, gụnyere otu esi ewepụ ha, biko rụtụrụ aka na aboutcookies.org. Ga-ahụkwa nkọwa gbasara otu esi ehichapụ kuki na kọmputa gị.
37. maynweghị ike nyefee onye ọ bụla ikike gị n'okpuru iwu nzuzo a n'aka onye ọzọ. Anyị nwere ike nyefee ikike anyị n'okpuru iwu nzuzo a ebe anyị nwere ezi uche na anyị ga-emetụta ikike gị.
38. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe ọ bụla ma ọ bụ ikike tozuru oke achọpụtala na ndokwa ọ bụla nke iwu nzuzo a (ma ọ bụ akụkụ nke ihe ọ bụla) na-adabaghị adaba, enweghị iwu ma ọ bụ nke na-agaghị agbagha, usoro a ma ọ bụ nkewa ga-elele ya anya, ndaba na nnabata nke usoro ndị ọzọ nke iwu nzuzo a agaghị emetụta ya.
39. Ewezuga nkwekọrịta ọzọ, oge ọ bụla, ihe ma ọ bụ iwepu ikike nke ndị ọzọ n'iji ikike ọ bụla ma ọ bụ dozie ha ga-ahụta na nke ahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, aka nri ma ọ bụ usọbọ.
40. Iwu a ga - achịkwa ma kọwaa ya dịka iwu England na Wales si dị. Esemokwu niile na-ebilite n'okpuru nkwekọrịta ga-adị n'okpuru ikike nke ụlọ ikpe Bekee na Welsh.
Ngbanwe na iwu nzuzo
41. Li Tim-Oi Foundation nwere ikike ịgbanwe iwu nzuzo a dịka anyị nwere ike chee na ọ dị mkpa site n'oge ruo n'oge ma ọ bụ dịka iwu chọrọ. A ga-ebipụta mgbanwe ọ bụla na weebụsaịtị ahụ ozugbo ma ị na-ahụta na ịnwere usoro nke iwu nzuzo na ojiji mbụ nke weebụsaịtị na-eso mgbanwe.
Nwere ike ịkpọtụrụ Li Tim-Oi Foundation site na email na info@ltof.org.uk.
42. Emepụtara iwu nzuzo a site na iji akwụkwọ sitere na Rocket Lawyer
(https://www.rocketlawyer.co.uk). 31 Machị 2019